सुन्दर सोलोमन टापुहरूमा के गर्ने | यात्रा समाचार
यदि तपाईंले नक्शा लिनुभयो भने तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यूरोपको सबैभन्दा टाढा गन्तव्यहरू मध्ये एक दक्षिण प्रशान्त हो, तर टाढा टाढा पनि सुन्दर छ। को सोलोमन द्वीपहरू तिनीहरू यहाँ पापुवा गिनीको पूर्वमा छन्।
टापुहरू सुन्दर छन्, सँगै उत्कृष्ट समुद्र तटहरू, अचम्मका आवासहरू, WWII सम्बन्धित धेरै धेरै र जमिनमा र फिरोजी पानी मुनि दुबै सुन्दरहरू। स्वर्गको लागि लामो उडान, तर तपाईंलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
1 सोलोमन टापुहरू
2 सोलोमन टापु छुट्टिहरु
यो एक छ लगभग एक हजार सानो द्वीपको साथ छवटा प्रमुख टापुहरूको द्वीपसमूह। राजधानी गुआडक्कल टापुमा छ र यो शहर हो होनियारा। १ th औं शताब्दीको अन्त्यमा अ English्ग्रेजीहरूले उनीहरूको झण्डा खोले र ती टापुहरू बेलायती संरक्षक बने, जसको लागि उनीहरूले दोस्रो विश्व संघर्षमा एकदम नराम्रो समय बिताए। तिनीहरू'० को दशकको अन्तमा स्वतन्त्र भए। आज उनीहरूले महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई राजाको रूपमा मान्यता दिन जारी राखेका छन्।
बेलायती समयमा ब्रिटिश र अष्ट्रेलियाली दुबैले दोस्रो विश्वयुद्धसम्म नरिवलको बगैंचाको शोषण गरे। त्यसैले ती टापुहरू खाली गरियो र वृक्षारोपणहरू त्यागिए। सहयोगी र जापानीहरु बीच धेरै रक्तपातपूर्ण लडाईहरु यहाँ भयो, उदाहरणका लागि ग्वाडाल्कानलको युद्ध। सत्य यो हो कि कुनै स्वतन्त्रता सस्तो छैन त्यसैले टापुहरूको राजनीतिक जीवन २० औं र २१ औं शताब्दीको सुरुतिर त्यति शान्त हुन सकेन।
मौसमको सम्बन्धमा टापुहरु धेरै आर्द्र छन् २ year डिग्री सेल्सियसको औसत तापमानको साथ सबै बर्ष। एक यात्रा मा जान र गर्मी को मर्न छैन जुन जुन, जुलाई र अगस्त संग सबै भन्दा राम्रो महिना। यो बढी वर्षा हुन सक्छ वा नोभेम्बरदेखि अप्रिल बीचमा चक्रवात हुन सक्छ। आर्थिक गतिविधिको हिसाबले सोलोमन्सले काठ निर्यात गर्छन् र त्यसैले उनीहरूको जंगल अत्यधिक दोहनका लागि खतरामा छ। केहि समयको लागि, डाइभि and र स्नोर्कलिंग पर्यटन बढिरहेको छ।
अन्तमा, दिमागमा राख्न: यद्यपि अंग्रेजी आधिकारिक भाषा हो, प्रायः कसैले पनि दैनिक आधारमा बोल्दैन। तिनीहरू बोल्छन् पिजिन, स्थानीय भाषा, र अन्य धेरै बोलीहरू।
सोलोमन टापु छुट्टिहरु
सालोमन यात्रा गर्न तपाईंलाई राहदानी चाहिन्छ र तपाईंको देश, भिसामा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं युरोपेली हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई सम्भवतः 90 दिनसम्म बस्न आवश्यक पर्दैन। अब जब हामी यी सुन्दर टापुहरूको बारेमा थोरै कुरा जान्दछौं, अब केहि समय पछि के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने समय भयो युरोपबाट २ hours घण्टाको यात्रा र South० दक्षिण अमेरिकाबाट।
सोलोमन टापुको खजाना पानीमुनि छ। धेरैले यसको आश्चर्यहरू जान्न सागर पार गर्दछन् तिनीहरू कोरल त्रिकोणको रूपमा चिनिने क्षेत्र भित्र अवस्थित छन्। यसको सुन्दर र धनी पानी मध्ये एक को रूपमा घोषित गरिएको छ सात महासागरको प्राकृतिक आश्चर्यत्यसोभए माछा र कोरलको विविधता कल्पना गर्नुहोस् जुन तपाईं यहाँ देख्नुहुनेछ।
त्यहाँ केहि छन् कोरल को 500 प्रजाति नरम र कडा र ती सबै एक गठन कोरल रीफ 5.700०० वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी.
फलस्वरूप, चट्टानहरू मध्ये धेरै जनावरहरूको घर हुन्छ रंगीन माछा, ब्याराकुडास, डल्फिन, स्टिंग्रे, कछुए र शार्कहरू। पानीको मुनि पनि, माथि हामीले भनेजस्तै गरीरहेछ विश्व युद्ध को सम्झनाहरु ii: विमानहरू, जहाजहरू, तेल ट्याkers्करहरू, विध्वंसकहरू, जापानी विमानहरू, पनडुब्बीहरू ... राजधानीको एकदम नजीक पनि, चिनिने क्षेत्रमा फलाम तल्लो ध्वनि।
यसका अन्य क्षेत्रहरू पनि छन् डाइभिंग र स्नोरकेलि। वास्तवमै राम्रो हो र अरूले तस्बिर लिनको लागि सेवा दिन्छन्। उदाहरण को लागी, सुन्दर मारोभो लगून, युपी टापु जस्तो सपना समुद्री किनारमा निर्जन टापुहरूको साथ स्टड संसारको सबैभन्दा ठूलो खारा लगुन। त्यहाँ पनि छ रोभियाना लगून, मुंडाबाट kilometers० किलोमिटर र कोरल रीफ्स र टापुहरू द्वारा अँगालेको। यसको भित्रमा कास्टम शार्क गुफा हो जुन मैंग्रोभ्सको बीचमा लुकेको छ जसको खोलामा गहिरो निलो नुन पानीको पोखरी छ जुन गुफाको जालमा खस्छ।
यदि तपाईं स्थानीय संस्कृति ब्राउज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं यसको केहि भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ पुरातात्विक साइटहरूपहाडी क्षेत्रका किल्लाहरू, खोपडीले भरिएका मन्दिरहरू, उदाहरणका लागि। यस टापुका बासिन्दाहरू हुन् काठको विशेषज्ञहरु त्यसैले त्यहाँ धेरै सुन्दर हस्तशिल्पहरू (नक्काशीहरू, गहनाहरू, टोकरीहरू) छन् जुन सबै गाउँहरूमा परम्परागत प्रविधिहरूको साथ बनेको छ र समयको साथ राम्रो स्मारिका बन्न पुगेको छ।
त्यहाँ धेरै यात्राहरू छन् ट्रेकिंगदुबै होनियारा बाट छोटो यात्रा जुन तपाईंलाई गाउँहरू र सेता समुद्र किनाराहरू पत्ता लगाउँदछ, अन्य टापुहरूमा समेत यात्रा गर्दछ। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ एक ज्वालामुखी, कोलोम्बंगारा चढ, १1770०-मीटर उचाइको शंक्वायर ज्वालामुखी जुन दुई दिन सम्म तटबाट क्रेटर रिंगमा सम्मिलित छ। ऊ एउटा शिविरमा सुते र सबैभन्दा बढी हो।
तर यदि पानी हिड्नु भन्दा बढी तपाईंलाई पानी मन पर्छ भने सुन्दर समुद्र तटहरूमा तपाईं झरना थप्न सक्नुहुन्छ। केही धेरै लोकप्रिय छन् Mataniko झरनाहरु, जो पोखरी र लुकेको गुफामा अन्त हुन्छ। यो साइट एक गाईडका साथ परिचित छ र सामान्यतयाaमा परिचित छ WWII भ्रमण। र तपाइँ साईन अप गर्न पनि सक्नुहुन्छ माछा मार्ने पर्यटन, कश्ती पर्यटन पारदर्शी र न्यानो पानीको साथ फ़िरोज़ा लग्नेहरूमार्फत। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि?
अन्त्यमा, यस जस्तो स्थान विशेष स्थानमा सुत्न योग्य छ। अवश्य होटल, मोटलहरू, भाडा क्याबिनहरू, ब्याकपैकर स्पटहरू, रिसोर्टहरू छन् y इको-लजहरू ती अद्भुत छन्। यदि तपाईं सोलोमन्समा बजेट लजमा कहिलै बस्नुभएन भने त्यहाँ केही राम्रा राम्रा चीजहरू छन्।
हेर्नुहोस्, यो लामो यात्रा हुन सक्छ, यति सस्तोमा होईन दूरीको कारणले र किनभने टापुहरूको भ्रमण भनेको डु boats्गामा चढिरहेको र बाहिर निस्कने संकेत गर्छ वा एजेन्सी भ्रमणको लागि साईन अप गर्दछ, तर यदि तपाईंलाई यस जस्तो गन्तव्यहरू मन परेको छ भने टाढा, सुन्दर र थोरै ज्ञात छ। ... राम्रो सोलोमन टापु तपाईंको प्रतीक्षा गर्दै।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » ओशिनिया » सुन्दर सोलोमन टापुहरूमा के गर्ने